Shacabka sweden oo ka welwelsan xaaladda caalamka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shacabka sweden oo ka welwelsan xaaladda caalamka
La daabacay tisdag 12 januari 2016 kl 13.40
"Argagaxisada, dagaalada, qulqulka qaxootiga"
Inkastoo shacabka Sweden u arkaan nolashada waddankooda mid wanaagsan hadana waxaa sii kordhaya welwel ay ka qabaan xaaladda caalamka. Sidaas waxaa muujinaya aragti aruurin ay hey’adda MSB ka qaaday shacabka Sweden.
Helena Lindberg waa agaasimaha guud ee hey’adda dowliga ah ee MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).
- Waxaa muuqata isbeddel xaaladda caalamka hadey ahaan laheyd degaanada nagu dhegan ama guud ahaan caalamka. Sida mucjisada argagaxisada, dagaalada, sida dagaalka ka aloosan Suuriya, qulqulka qaxootiga. Iyo weliba xasaradda uu Ruuska wado, hadey ahaan laheyd qabsashada Krim iyo dagaalka uu ka wado dalka Ukraa’iin, ayey tiri.
Waxaa soo badanaya welwelka shacabka Sweden ka qabo xaaladda caalamka, sida ay ka muuqato afkaar aruurinta ay hey’adda MSB ka qaadey shacabka Sweden. Gaar shacabka Sweden waxay aad uga welwelsanyahiin falalka argagaxisada, sida ey tiri Helena Lindberg agaasimaha MSB. Inta badan dadka Sweden boqolkii 57 ayaa ka welwlesan weeraro ay argagaxisada ka fuliso gudaha Sweden shanta sanno ee soo socota.
Sidoo kalena waxaa sii kordhaya taageerada ay dadka Sweden u hayaan in waddanka ku biiro oo xubin ka noqdo gaashaanbuurta Nato. Boqolkii 49 dadka Sweden ayaa aaminsan in Sweden ku biirto Nato sida ay muuijneyso afkaar aruurin arrinkan la xiriiro oo la sameeyey sannadkii hadda dhamaaday, boqolkii 60 dadka waxay doonayaan in la qalabeeyo oo dhaqaalaha loo kordhiyo difaaca dalka, waana labo jibaar tirada sidaas dooneysa marka loo barbardhigo saddex sanno ka hor.
Sannadkii hore ayey aheyd markii aragtida dad Sweden ee la xiriirta ku biirista Nato ay guud ahaan isbadeshay oo boqolkii 49 taageereen in lagu biiro Nato, halka tirada diidan ku biirista Nato ay hoos u dhacday oo ay noqotay boqolkii 34.
Arrin kale oo afkaar aruurinta sannadka ka muuqatay waxay tahay in tiro badan dadka Sweden ka welwelsantahay so badashada macluumaadka beenta ah iyo propaganada.
- Mida aan arkey oo aan qabo in muhimtahay isha in lagu hayo waa macluumaadka beenta ah ee baahinayaa quwado shisheeyo oo doonaya saameyn in ay ku yeeshaan bulshadeena iyaga oo adeegsanaya macluumaad been bauur ah, ayey tiri.
Inkasta oo uu kordhay welwelka shacabka ka qabaan mushtaqbalka, hadana sida laga dheehan karo baaritaankan afkaar aruurinta ee hey’adda MSB mutaqbalka sidaas mugdi ma uwado aha, sida ay tiri Helena Lindberg.
- Ma tahay Sweden waddan nolashiisa wanaagsan tahay? Jawaabta su’aalshan waxay ku sugan tahay boqolkii 90-99 haa. Tirida ugu badan shacabka Sweden waxay aaminsantahay Sweden in ay tahay waddan nolal wanaagsan ay ka jirto oo lagu noolaan karo, ayey tiri agaasimaha MSB Helena Lindberg.
Vju: Anders Ljungberg